जहाँ खुसीका लागि बाँधिएर महिलाको चाबुक सहन्छन् पुरुषहरु (तस्विर सहित)
२०७५ असोज ७ आइतबार, एजेन्सी । यो खबर सुनेर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । एउटा देश । जहाँ धेरै जसो युवाहरु विवाह गर्नबाट भाग्छन् । उनिहरु एक्लै बस्न रुचाउछन् । सोही कारणले सो देशको जनसंख्यामा पनि गिरावट आएको छ । यो कहानी अन्य देशको नभएर जापान हो। ... बाँकी अंश»
सूर्य नअस्ताउने मुलुकहरु
२०७५ असोज ७ आइतबार, एजेन्सी । हामि सबैलाई थाहा छ दिनको सुरुवात सुर्यको प्रकाशबाट हुन्छ । त्यस्तै रात उज्यालो हटनुले । सूर्य उदाउनु र अस्तउनुले एक दिनलाई जनाउदछ । ... बाँकी अंश»
धनाढ्यको कुकुर प्रेम : अनुहार सर्जरी गरी कुकुरकै रुप
२०७५ असोज ७ आइतबार, एजेन्सी। केही केही मानिसहरुको विचित्रको शोख हुन्छ। मानिसहरु चर्चामा आउन अनेक प्रकारको तडकभडक गर्ने गर्दछन्। लाग्छ कि हामी आफै ठूलो बिनाशको प्रतिक्षामा छौं र प्रकृतिको सिर्जनाको विपरीत कार्यहरु गर्न थालेका छौं। ... बाँकी अंश»
संसारका १० सुन्दर पुल (तस्विर सहित)
२०७५ असोज ६ शनिबार, एजेन्सी। हाम्रो देश नेपाल अथा प्राकृतिक श्रोतको धनी देश मानिन्छ। बर्ष नै हजारौ पर्यटक नेपालमा त्यहि प्राकृतिक भौगोलीकताको मनमोहक दृश्य हेर्न आउने गर्दछन। तर सहि व्यवस्थापन नभएर पर्यटक गन्तव्यहरु धराशय हुदै गएको गुनासो वेलावेला सुनिदै आएका छन्। ... बाँकी अंश»
मानव तस्करीको डरलाग्दो अवस्था : एकै महिला ४३ हजार भन्दा बढी पटक बलात्कृत !
२०७५ असोज ६ शनिबार, काठमाडौं। तपाइ यस्तो पनि हुन सक्छ भनेर सुन्दा पनि आश्चर्यमा पर्न सक्नुहनेछ। तर यो सत्य घटना हो। घटनाका पात्रले स्वयंले यो कुरा बताएपछि संसारभरकै मानिसहरु आश्चर्यमा परेका थिए। ... बाँकी अंश»
महिलाको ११.५ इन्च लामो दाह्री !
२०७५ असोज ६ शनिबार, एजेन्सी।अमेरीकाको लसभेगास शहरमा बस्ने जेसा नाम गरेकी एक महिलाका अनुसार उनी सवै भन्दा लामो दाह्री भएकी महिला रहेको बताएकी छन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिकाको एक भुतघर : जसलाई सबै परिवारको मृत्युपछि सरकारले कब्जामा लियो (तस्विर सहित)
२०७५ असोज ६ शनिबार, एजेन्सी । संसारको 'मोस्ट हन्टेड प्लेसेज' मध्ये अमेरिकाको क्यालिफोनियामा अवस्थित एक घर सबैभन्दा डरलाग्दो घरको सुची रहेको छ । सेन दिएगो शहरमा रहेको उक्त घरमा बस्न गए जति सबैको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
तालुखुईले बढी सेक्सी !
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, काठमाडौं । तालुखुईलिने अर्थात् टाउकोको कपाल झर्ने समस्याबाट विश्वका कयौं पुरुष दुःखी छन्, हुँदै आएका छन् । तर, टाउकोबाट कपाल झर्ने (तालुखुईले) मानिस अन्यको तुलनामा ज्यादा सेक्सी हुने देखिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । चीनका व्यापारी टाइकुन वू रुईबाओले आफ्नी छोरीलाई दाईजोमा १३ सय ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दिएका छन् । टायलका ब्यापारी टाइकुनले दाईजोको रुपमा यति ठूलो धनराशी दिएर एक रेकर्ड बनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
कुकुरको नाममा २१ करोड रुपैयाँ
२०७५ असोज ४ बिहिबार, एजेन्सी । इटालीकि एक महिलाले आफ्नो संम्पूर्ण सम्पत्ति करिव २१ करोड रुपैयाँ (२० लाख यूरो) आफ्नो प्यारो कुकुरको नाममा गरिदिएको खुलासा गरेकिछिन्। ... बाँकी अंश»
संसारकै संभवत: खतरनाक गोरेटो, काठको फल्याक निर्मित पहाडी बाटो (तस्विर र भिडियो )
२०७५ असोज ४ बिहिबार, एजेन्सी। विश्वमा धेरै ठाउँहरु मनमोहक, रहरलाग्दा र जाउवजाउँ लाग्ने खालका हुन्छन। तर कति ठाऊँ जानकालागि ज्यानको जोखिम पनि हुन्छ। संसारमा यस्ता धेरै मानिसहरु छन जो जोखिमयुक्त काम गर्न रुचाउँछन र त्यस्ता जोखिमलाई जिवनको एक अंशको रुपमा लिन्छन्। ... बाँकी अंश»
यस्ता विचित्रका तस्विर देख्नुभएको छ ? (तस्विर सहित)
२०७५ असोज ३ बुधबार, एजेन्सी । संसारमा मानिसहरु अनौठा काम गर्न सोख राख्दछन् । त्यस्ता काममाहरु उनिहरुले खतराको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । ... बाँकी अंश»
सुँगुरलाई धेरै माया
२०७५ असोज ३ बुधबार, एजेन्सी। सम्भवतः कुकुर मानिसको प्रिय जनावर ठानिन्छ। तर सबैको प्रिय जनावर एउटै हुँदो रहेनछ। त्यस्तै उदाहरण बनेकी छन् बेलायतको केन्टमा बसोबास गर्ने मारिया चोपर। ... बाँकी अंश»
२ वर्षको बच्चाले जाँड पिएपछि...
२०७५ असोज २ मंगलबार, लण्डन। जाँड सेवनले जो कोहीलाई मताउने गर्छ । हरेक दिन विश्वका कयौं मानिस जाँडले मातेर अनेक वितण्डा गरिरहेका घटनाहरु बाहिर आउने गर्छन् । ... बाँकी अंश»
भित्रै घुसाइदिनुस् टिप्स !
२०७५ असोज २ मंगलबार, एजेन्सी। पश्चिमेली मुलुकमा नाङगो दृष्य दिनु वा कम भन्दा कम कपडामा नृत्य गर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । तर पनि नृत्य गर्ने नर्तकीले फरक र मस्त तरिकाले दर्शकसँग नृत्यपछि पाइने टिप्स बटुल्छन् भने त्यो चाखको विषय पक्कै पनि बन्छ। ... बाँकी अंश»
यस्ता मानिसहरुको रोजाइमा थिए ओबामा
२०७५ असोज २ मंगलबार, काठमाडौं । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा शान्त प्रकृतिका छन् । उनको स्वभावका कारण पनि उनी धेरैको रोजाइमा थिए तर सन् २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको क्रममा उनको सर्मथनमा पोर्न फिल्म खेल्नेहरु सडकमा ओर्लिएको घटनाले धेरै चर्चा पायो । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ १९ मंगलबार, गौरादह । केहीदिन अघिसम्म गौरादह नगरपालिका वडा न ९ बैगुन्धुरा वडा कार्यालय परिसर पुग्ने जो कोहिले देखेको दृश्य हो यो । बैगुन्धुरा वरपर घर घरमा पुगेर एक मुठ्ठी चामल माग्दै हिड्ने "झम्की दिदी "आज त्यहा छैनन , बैगुन्धुराका सडकहरु पनि एकाएक सुनसान छन । जहाँ दिनहु जसो एक बेसहरा जीवन डोहोर्याउने 'झम्की दिदि' हिजो आज निकै बिरामी छन् । उनि अस्ति पापी पेट पाल्न घस्रीदै गर्दा अचानक लडिन् । अहिले उनको गोडा कामै नलाग्ने गरि भाचिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ १९ मंगलबार, नयाँ दिल्ली । के तपाईँलाई पनि भगवान बन्ने रहर छ ? पछिल्लो समय आफूलाई भगवान हो भन्न चाहने धेरै शासक र धर्मगुरुहरुको बीचमा हामीले भगवान बन्नको लागि कस्ता गुणहरु आवश्यक पर्दछ ? यस विषयमा केही कुराहरु प्रस्तुत गर्दैछौं । ... बाँकी अंश»
१३ वर्षका बालकले कार चलाएर २ देश पार गरे !
२०७५ भदौ १८ सोमबार, काठमाडौं। इटालीका एक १३ वर्षीय बालक आफ्नो परिवारसँग मिल्नका लागि घरबाट बाबुको कार लिएर भागे, त्यतिमात्रै होइन ती बालकले कार चलाएर १ हजार किलोमिटरको यात्रा समेत पार गरे । ... बाँकी अंश»
२०७५ भदौ १६ शनिबार, एजेन्सी। तपाइले संसारमा अनेक जुम्ल्याहाको रुचीका बारेमा सुन्नु र देख्नुभएको होला। उनीहरुको कतिपय वानी र व्यहोरा मिल्छन भन्ने तपाइलाई थाहा पनि होला। तर जतिसुकै भएपनि एउटै व्याइफ्रेन्डलाई एउटै ओछ्यानमा शेयर गर्ने रुची भने अनौठो लाग्न सक्छ। पश्चिम अष्ट्रेलिया पर्थका दुई जुम्ल्याहा महिला यस्तै अनौठो रुची र व्यवहारका कारण चर्चामा रहेका छन्। अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार आफूमा कुनै किसिमको फरक नदेखियोस भनेर उनीहरुले १ लाख ३० हजार पाउण्ड खर्चिएर ओठ, आँखिभौ र स्तन समेत उस्तै बनाएका छन्। ... बाँकी अंश»